वि.सं. १९५० ताका घना जङ्गल फडानी गरेर बसाइएको एउटा सानो बस्ती आज ‘लाहुरेको शहर’ बनेको छ ।
धरान र ब्रिटिश लाहुरेहरू बीचको सम्बन्ध ६ दशक अघिको हो । वि.सं. २०१० मा धरानमा ब्रिटिश गोर्खा सैनिक कार्यालय (भर्ती केन्द्र) स्थापना भएको थियो । पूर्वी पहाडका युवाहरू यहाँ ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुन आउँथे । अवकाश पाएपछि पूर्वी पहाडका लाहुरेहरूले धरानलाई आश्रयस्थलको रूपमा रोज्थे ।
आम नेपालीभन्दा औसत आम्दानी बढी हुने लाहुरेहरूको रोजाइ हुन्थ्यो धरान । यहाँ उनीहरूले चिटिक्क परेका घर बनाउन थाले । विदेशमा सिकेका संस्कारलाई पछ्याउन थाले । यसरी विस्तारै चिटिक्क परेको सफासुग्घर घरहरू भएको शहर बन्न थाल्यो धरान । धरानमा लाहुरेको उपस्थिति शहरको व्यापार वृद्धि र चमकधमकको मुख्य आधार बन्न थाल्यो ।
तर अहिले धरान बजारमा लाहुरे–लाहुरेनीको भीड देखिंदैन । बेलायतमा बस्ने अधिकार पाएपछि धरानबाट लाहुरेहरू एकएक गर्दै बेलायत, सिङ्गापुर र ब्रुनाईतिर लागिसके । धरानमा रहेका करीब १० हजार भूपू गोर्खा परिवारमध्ये ९० प्रतिशत जति बेलायत गइसकेको भूपू लाहुरेहरू बताउँछन् ।
उनीहरूको बेलायत बसाइले नेपाल भित्रिरहेको मासिक ६५ करोड बराबरको रेमिट्यान्स उतै थन्किन थालेको धरानका आर्थिक विश्लेषक राजेन्द्र शर्मा बताउँछन् । एकातिर धरानबाट लाहुरे परिवारको पलायनले धरान शहर प्राणविहीन बन्दैछ । धरानको व्यापार स्वात्तै घटेको छ ।
अर्कोतिर नेपालमा रहेको श्रीसम्पत्ति पनि बेचेर बेलायत लैजाने क्रम बढेपछि पूँजी पलायनको विकराल समस्या पैदा भएको उनको ठम्याइ छ ।
अहिले धरान बजारमा लाहुरे–लाहुरेनीको भीड देखिंदैन । बेलायतमा बस्ने अधिकार पाएपछि धरानबाट लाहुेरहरू एकएक गर्दै बेलायत, सिङ्गापुर र ब्रुनाईतिर लागिसके । धरानमा रहेका करीब १० हजार भूपू गोर्खा परिवारमध्ये ९० प्रतिशत जति बेलायत गइसकेको भूपू लाहुरेहरू बताउँछन् ।
धरान–१५ का भूपू क्याप्टेन पूर्णप्रसाद लिम्बू भन्छन्– ‘यहाँबाट लाहुरेहरू गएका गएकै छन् तर फर्किने संख्या शून्य जस्तै छ । क्याप्टेन लिम्बू वेलफेयर अफिस धरानको सिनियर एरिया वेलफेयर अफिसरको रूपमा कार्यरत छन् । तर आफू भने देशको लागि नेपालमै बसेको उनी बताउँछन् । अब पलायन भएका लाहुरेमा राष्ट्रियताको भावना पैदा गर्न सके मात्र नेपाल फर्केर आउने उनले बताए ।
प्रकाशित मिति : २०७८ असोज ९ गते शनिवार